Nomad Base Station Hub. Ugbu a dakọtara na nchaji MagSafe | esi m na mac
Nomad Base Station Hub. Ugbu a dakọtara na nchaji MagSafe
Jordi Gimenez | | Ngwa, iPhone
Nomad na-ewepụta ntọala chaja ọhụrụ na emelitere maka iPhone 12, iPhone 13 na AirPods, nke ọ dị mfe iji kwado ngwaọrụ ka ha wee kwụọ ụgwọ. Nomad bụ otu n'ime ụlọ ọrụ anyị na-arụkọ ọrụ kemgbe ọtụtụ afọ ma eziokwu bụ nke ahụ àgwà nke ngwaahịa ya na ngwa ya tụrụ anya ozugbo anyị nwere ha n'aka. N'okwu a, na ntọala nchaji ọhụrụ, nke dị n'ọdịdị dị nnọọ ka ihe nlereanya gara aga, anyị nwere ike ikwu na àgwà nke ihe eji eme ihe bụ n'ezie nke dị elu.
Anyị ji n'aka na ozugbo ịmalitere iji nke ọ bụla n'ime ngwaahịa ha, ị ga-aghọta n'ezie ihe anyị na-ekwu na ya bụ na Nomad ị gaghị enwe nsogbu n'ụdị ọ bụla, ọ dịghị malfunctions na chaja gị ma ọ bụ nkwụsị nke eriri gị. Ihe niile ha na-eme nwere ike bipụta akara ngosi Apple na ya, bụ otu n'ime ndị ọrụ Apple ama ama ma anyị ghọtara nke ọtụtụ ngwaọrụ ndị ọzọ ebe ha nwere ngwa maka ụdị ndị ọzọ n'ime katalọgụ ngwaahịa weebụ gị.
1 Kedu ihe dị n'igbe ahụ maka ntọala chaja nke Nomad a
2 Ike Nchaji Hub ọdụ ọdụ
3 Ihe eji arụ ọrụ nke isi nchaji
Kedu ihe dị n'igbe ahụ maka ntọala chaja nke Nomad a
N'ime igbe ahụ anyị na-ahụ ihe niile ịchọrọ iji nwee ike iji isi ihe na-akwụ ụgwọ na-enweghị ịzụta ngwa ndị ọzọ. N'okwu a, a na-agbakwunye eriri ọkụ dị mma n'ihe gbasara nguzogide, mere nke naịlọn na ogologo ya karịa maka onye ọrụ ọ bụla nke karịrị otu mita. Tụkwasị na nke ahụ, a na-agbakwụnye ihe nkwụnye maka mgbidi mgbidi na ọ na-arụ ọrụ n'ebe ọ bụla n'ụwa, n'ihi ya, anyị nwere ike iburu isi nchaji ebe ọ bụla.
Dị ka anyị nwere ike na-ekwu mgbe niile na nkwakọ ngwaahịa ọhụrụ a cha cha isi ulo oru nke Californian ike bụ magburu onwe ya na tinye ihe niile ịchọrọ iji chajịa ngwaọrụ gị ozugbo na igbe na jikọọ na mgbidi.
Ike Nchaji Hub ọdụ ọdụ
N'okwu a, anyị nwere ike ikwu na Ibu kachasị bụ 10W na akụkụ MagSafe ya, gbakwunye ọdụ ụgbọ mmiri USB 18W na ọdụ ụgbọ mmiri 7,5W USB A.. Site na ike ịchaji ndị a, ndị ọrụ ga-enwe ike ịgbanye ngwaọrụ ha n'ụzọ dị iche iche na ọ dịghị mkpa ịhapụ ngwaọrụ ahụ na isi iji kwụọ ya ụgwọ, ọ nwere ike jikọọ ya ozugbo na eriri ọ bụ ezie na ọ ga-atụfu amara niile.
Anyị kwesịrị iburu n'uche na ntọala chaja ikuku nke ụdị a enweghị ike ma ọ bụ ga-adị ọkụ nke ukwuu, yabụ na ọ naghị agbakwunye nchekwa niile dị mkpa ka nke a ghara ime. IPhone anyị ga-adị mma ịchaji na Nomad base a, yabụ na ọ dịghị mkpa ichegbu onwe gị.
Ihe eji arụ ọrụ nke isi nchaji
Dị ka anyị tụlere ntakịrị n'elu, ihe ndị a na-eji emepụta ihe nkwụnye ụgwọ a dị elu, ọ na-agbakwụnye akpụkpọ anụ sịntetik maka isi wee si otú ahụ chebe iPhone anyị mgbe ị na-ebu ụgwọ ọbụlagodi na ọ naghị etinye ikpe na aluminom maka akụkụ ahụ. Anyị ga-ekwu na ikpe ndị nwere nkwado MagSafe dakọtara na chaja chaja a, ị gaghị enwe nsogbu na ya.
N'akụkụ nke ala, a na-agbakwunye ụfọdụ eriri roba ka ọ ghara ịdaba mgbe anyị nwere ya na tebụl ma gụnyekwara ọkụ ọkụ na-agbanwe agbanwe nke na-eme ka ìhè ihu igwe si dị, na-akpaghasị ntakịrị mgbe ọ nọ n'ebe gbara ọchịchịrị. Nhazi bụ otu ihe ahụ dị ka ihe nlereanya gara aga ma N'ime, tinye magnetik maka nhazi zuru oke mgbe ị na-akwụ ụgwọ iPhone ma ọ bụ AirPods anyị.
N'ozuzu, ntọala a bụ zuru oke maka ịchaji iPhone ma ọ bụ AirPods anyị ekele maka eriri igwe atọ ọ na-agbakwunye n'ime. Na mgbakwunye, a na-edozi ibu ahụ ugbu a na ngwaọrụ ndị nwere MagSafe ekele maka magnet dị n'ime. N'echiche a, ọ bụghị na ngwaọrụ ndị ahụ na-ejikọta ya n'ụzọ nkịtị kama a na-ebu ya n'ụzọ dị mfe karị mgbe etinyere ya. Anyị nwere ike iji isi na ọtụtụ ụzọ ma ọ bụ ọnọdụ na ọ na-ekwe ka iPhone na-etinye horizontally ma ọ bụ kwụ ọtọ na ya, ọ ga-ana n'enweghị.
Ọnụ ego nke ntọala Nomad na nhazi ndọta sitere na 119,99 euro na weebụsaịtị Macnificos.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » Ngwa » Nomad Base Station Hub. Ugbu a dakọtara na nchaji MagSafe
Ịchaji nsogbu na Apple Watch na watchOS 8.3
Ndị na-ese ihe na-eme mkpesa na Apple maka okirikiri oroma dị na menu mmanya na macOS Monterey